आयो फिल्म ब्रह्मास्त्रको ट्रेलर - Jhapa Online
आयो फिल्म ब्रह्मास्त्रको ट्रेलर
हलिउड फिल्ममा हामीले एक्सन हिरो मार्भल्सका एभेन्जर्स, ह्यारी पोटर जस्ता धेरै काल्पनिक पात्रहरू हेर्दै आएका छौँ । यी पात्रहरूले आफ्नो वरिपरि नयाँ संसार बनाएका छन् । हिन्दी सिनेमाका युवा निर्देशक अयान मुखर्जी पनि केही यस्तै प्रयास गरिरहेका छन् ।
अयान मुखर्जी निर्देशित पौराणिक चलचित्र ‘ब्रह्मास्त्र’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । अमिताभ बच्चनको आवाज, रणबीर कपुर र आलिया भट्टको झलकसँगै देखिएका छन् साउथका सुपरस्टार नागार्जुन र मौनी रोय । ट्रेलरको सुरुवातमा महाबली र सर्व शक्तिशाली अस्त्रलाई खोजिरहेको कहानी देखाइएको छ । रणबीर र आलियाबीच रोमान्सका साथै अत्यधिक सस्पेन्सका साथै यो फिल्ममा अस्त्रका देवता ‘ब्रह्मास्त्र’ को शक्तिलाई देखाउने कोसिस गरिएको छ ।
रणवीर कपुरले कुन भूमिका निर्वाह गर्दैछन् ?
ब्रह्मास्त्रका निर्माताले यो फिल्म तीन भागमा दर्शकसामु आउने बताएका छन् । पहिलो भाग शिवा नामक पात्रमा आधारित हुनेछ, जसको भूमिका रणवीर कपूरले निभाएका छन् । शिवा एक अनाथ केटाको कथा हो जसको जीवनमा ईशा नामकी केटी आउँछिन् । इशाको भूमिका आलिया भट्टले निभाएकी छिन् ।
शिवालाई आगोले छुँदैन र यस्तो के कारणले हुन्छ भन्ने कुरा उनी आफैँलाई पनि थाहा हुँदैन । तर त्यहाँ एउटा नकारात्मक ऊर्जा पनि छ जसलाई ब्रह्मास्त्र चाहिन्छ । अब यस्तोमा शिवा आगोको यो खेलमा के टिक्न सक्छन् ? फिल्मको कहानी यसै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ ।
इशा उनको जीवनको प्रेम बन्छन् कि बन्दिनन्, अमिताभ बच्चनले गुरुको भूमिका कस्तो खेल्छन् ? मौनी रोयले नकारात्मक ऊर्जा लिएर खेलेको भूमिका कस्तो छ र नागार्जुनको उपस्थितिले फिल्मलाई कसरी सार्थक बनाउँछ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर सेप्टेम्बर ९ मा पाइनेछ ।
फिल्मको ट्रेलरमा खास के छ ?
फिल्म ब्रह्मास्त्रको ट्रेलर हेरेपछि दर्शकमाझ यसको भिएफएक्सको चर्चा छ । प्राइम फोकस नामको कम्पनीले भिएफएक्समा काम गरेको छ । प्राइम फोकसका मालिक नमित मल्होत्रा ​​पनि यस फिल्मका सह(निर्माता हुन् ।
प्राइम फोकसको स्पेशल इफेक्ट कम्पनी डीएनईजीले अहिलेसम्म सात ओस्कार जितेको छ । यस वर्ष हलिउड फिल्म ड्युनले भिएफएक्सका लागि ओस्कार जितेको छ । निर्देशक अयान मुखर्जीले ब्रह्मास्त्रको भिएफएक्समा करिब चार वर्षदेखि काम गरिरहेको बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार भारती दुबे भन्छिन्, ‘यो फिल्मको ट्रेलरलाई लिएर सुरुदेखि नै मानिसहरु उत्सुक थिए । झण्डै सात वर्षदेखि फिल्मको चर्चा चलिरहेको थियो । उनीहरू के बनाउँदैछन् भनेर मानिसहरू उत्सुक थिए । फिल्मको भिएफएक्सको चर्चा त भइरहेको छ नै रणबीर र आलियालाई पहिलो पटक एकैपटक हेर्न पनि दर्शकहरु उत्सुक छन् ।’
उनी भन्छिन्, ‘यो फिल्मको ट्रेलरलाई विशेष बनाउने तेस्रो कुरा भनेको आधुनिक पौराणिक कथा हो, यसबारे पहिलो पटक चर्चा भइरहेको छ । यस फिल्ममा प्रविधिको प्रयोग धेरै गरिएको छ । फिल्मको ट्रेलरले जुन प्रतिक्रिया पाइरहेको छ, रिलिजपछि पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया आयो भने यो मार्वल फिल्म झैँ एउटा ठूलो श्रृङ्खला बन्नेछ । रणवीरसँग अन्य धेरै ठूला कलाकारहरु जोडिने जानकारी पाएका छौँ ।’
शाहरुख खान ब्रह्मास्त्रमा देखिनेछन् ?
फिल्म ब्रह्मास्त्रमा अभिनेता शाहरुख खान केमियो रोलमा देखिने चर्चा पनि चलेको थियो । उनी वैज्ञानिकको भूमिकामा देखिने बताइएको छ । यद्यपि ट्रेलरमा शाहरुखको झलक कतै देखाइएको छैन ।
यो काल्पनिक फिल्म पहिलो पटक सन् २०१४ मा घोषणा गरिएको थियो । तर कुनै न कुनै कारणले फिल्म ढिलो भयो । तर अब आठ वर्षको लामो प्रतीक्षापछि यो फिल्मको पहिलो भाग रिलिजको तयारीमा छ । ‘ब्रह्मास्त्र’ हिन्दी बाहेक तमिल, तेलुगु, मलयालम र कन्नड भाषामा रिलिज हुनेछ ।बीबीसी
‘मिलन’मा त्रिकोणात्मक प्रेम
‘लण्डन टु पेरिस’मा साम्राज्ञीका लागि जोडी खोजिँदै
राम्रो कमाइमा ‘कबड्डी ४’को कीर्तिमानी कायम
रणवीर चाहना : हिरोसँगै भिलेन बन्ने
किन भयो किमले दिएको निवेदन अस्वीकार ?